रमिला न्यौपानेको तीज गीत ट्रेडिङ्मा (भिडियो सहित) - Kendrabindu Nepal Online News
लोक गायिका रमिला न्यौपाने र गायक खुमन अधिकारीको स्वरमा रहेको नयाँ तीज गित घुम्रे कपाल रिलिज भएको २ दिनमै युट्युबको २० नं. ट्रेडिङ्गमा उक्लिएको छ । हिन्दु नारीहरुको महान् पर्व हरितालिका तीज नजिकिदै गर्दा बजारमा नयाँ नयाँ तीज गितहरु आउने क्रममा आएको यो गित अहिले निकै रुचाइएको छ ।
युट्युबमा अप्लोड भएको २ दिनमै २ लाख २७ हजार भन्दा बढी दर्शकले हेरिसकेको यो गित अहिले ट्रेडिङ्ग नं. २० मा आएको छ । यस गीतमा खुमन अधिकारीको लय तथा बाबुराम बोहराको शब्द सिर्जना रहेको छ । संगित खुमन अधिकारी तथा संगित संयोजन विनोद बाजुरालीको छ ।
साथै प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेको गितमा राजेश घिमिरेको छायांकन छ भने बिष्णु शर्माले यसको सम्पादन गरेका हुन् । पशुपतिमा को म्युजिक भिडियोमा सुरक्षा पन्त र खुमन आधिकारीको अभिनय छ । तिर्सना म्युजिकले यसलाई बजारमा ल्याएको हो । हेरौं भिडियोमा :
२० नं. ट्रेडिङ्गमा, गायिका, गित घुम्रे कपाल, रमिला न्यौपानेको तीज
Prevआर्यघाटबाट फर्काइएकी महिलाको स्वास्थ्यमा आश्चर्यजनक सुधार
कांग्रेस बैठक १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा केन्द्रितNext